Xilliga la filaayo in la qabto xafladda caleemo saarka madaxweynaha iyo dalalka lagu casuumay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xilliga la filaayo in la qabto xafladda caleemo saarka madaxweynaha iyo dalalka lagu casuumay
Waxaa 22-ka bishaan Febraayo la filayaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya lagu qabto xafladda caleemo saarka madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Guddi ka kooban lix guddi-hoosaad ayaa loo magacaabay inay qaban-qaabiyaan xafladda caleemo saarka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana guddi kasta guddoomiye ka ah wasiir ka tirsan xukuumadii hore ee xilka sii heysa, iyadoo guddi waliba uu qaabilsanaan doonno arrin gaar ah.
Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo oo 8-da bishaan Febraayo ku guuleystay doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, ayaa tan iyo markaasi wuxuu xarun KMG ah ka dhigtay Hoteelka Jazeera, halkaas oo ammaankiisa si weyn loo illaaliyo.
Xafladda caleemo saarka madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegayaa in lagu casuumay madax ka kala socota dalalka IGAD, waxaana madaxda la casuumay ka mid ah madaxweynayaasha dalalka Jabuuti, Uganda, Kenya iyo Itoobiya.
Dhammaan madaxdaasi ayaa la filayaa inay magaalada Muqdisho soo gaaraan bilawga toddobaadka soo socdo.